Porosa Ridge Ibhedi kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Porosa Ridge Ibhedi kunye nesidlo sakusasa
Indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa yonke sinombuki zindwendwe onguCountry Getaways Holiday Rentals
UCountry Getaways Holiday Rentals unezimvo eziyi-371 zezinye iindawo.
Balekela kwilizwe ePorosa Ridge Bed & Breakfast, ekwifama esebenzayo kumbindi weYork Peninsula, imizuzu eli-10 ukusuka eArdrossan kunye nemizuzu eli-10 ukuya eMaitland.
Yiza nehashe lakho ukuze uphumle nalo – lilungiselelwe kakuhle kwiiyadi ezibiyelweyo. Phumla ngomlilo ebusuku, kumnandi kulo lonke usapho.
Ummandla wangaphandle unendawo yokucoca i-Weber Q kunye nendawo yokucoca iintlanzi kunye nendawo echongiweyo yokubasa umlilo owenziwe ngamaplanga (izithintelo zebhunga ziyasebenza). Kukho umatshini wokuhlamba umthwalo ngaphambili kunye nesomisi.
Amagumbi okulala ama-3 - ukumkanikazi, ama-2 angatshatanga, aphindwe kabini + angatshatanga
Portacot iyafumaneka (BYO Linen)
Zonke ilinen, iiQuilts kunye nemiqamelo zinikezelwe. Iingubo ezongezelelweyo ezibonelelwa ebusika
Ubonelelo lwesidlo sakusasa selizwekazi lunikiwe
Onke amagumbi okulala kunye negumbi lokuphumla linabalandeli besilingi
Indawo yokuphumla esembindini eneTV kunye nesidlali seDVD
Isitishi somculo seBluetooth ene-USB, iCD kunye nentambo ye-Aux
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elinefriji, ifriji, imicrowave kunye nomatshini wekofu wepod
Isifudumezi senkuni esivuthayo kwigumbi lokuphumla, kukho iinkuni
Umatshini wokuhlamba wangaphambili
isixhobo sokomisa iimpahla
I-Webber Q Barbecue inikezelwe
Igaraji yokupaka imoto enye
Indawo yokutyela yangaphandle
Indawo yokucoca iintlanzi
Indawo yomlilo echongiweyo eneenkuni ezibonelelweyo (Izithintelo zeBhunga kunye nemigaqo yomlilo iyasebenza)
Indawo yabucala enoxolo yasemaphandleni - ukuba yifama, indawo eninzi yokupaka
Izilwanyana zasekhaya ngolungiselelo kuphela (i-$100 yebhondi ebuyiselwayo iyasebenza kwisilo-qabane ngasinye). Akukho ndawo ibiyelweyo – ikheneli inokubonelelwa kunye namatyathanga ezinja
Amahashe amkelekile ($100 ibuyiswa bond iyasebenza ihashe ngalinye).
IArdrossan yindawo yokuloba edumileyo, apho iindwendwe zinyanzelekile ukuba zigoduke zivuzwe ngokubambisa okuninzi. Ilokishi eselunxwemeni idume ngeBlue Swimmer Crabs, kwaye ijethi ende yokuloba yaziwa kakhulu ngokubambisa izibiliboco ezimnandi ngomnatha okanye ungarhuqa ama-shallows. Izikhephe zilungiselelwe kakuhle e-Ardrossan ngayo yonke indlela yesikhephe yemozulu ekuza kuqaliswa kuyo.
Country Getaways Holiday Rentals ofisi ise Maitland SA kwaye ivula 9am- 4pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. Siyaqhagamsheleka ngefowuni okanye nge-imeyile, ngolwazi malunga nokubhukisha kwakho. Kungenjalo, i-Country Getaways inenombolo yenkxaso yasemva kweeyure ezifumanekayo kwiindwendwe ezifuna uncedo olukhawulezileyo. I-Country Getaways iya kufuna iinkcukacha zekhadi letyala emva kokubhuka, akukho nto ihlawuliswa kwikhadi (ngaphandle kokuba iibhondi ziyasebenza) kunye / okanye ngaphandle kokuba kukho umonakalo okanye iindleko ezongezelelweyo zokucoca.
Country Getaways Holiday Rentals ofisi ise Maitland SA kwaye ivula 9am- 4pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. Siyaqhagamsheleka ngefowuni okanye nge-imeyile, ngolwazi malunga nokubhuki…